Nhau - Iyo 2020 Waterproof Exhibition yakapera zvakakwana, uye iyo Lesite dumba yakagamuchirwa zvakanaka!
Iyo 2020 Waterproof Exhibition yakapera zvakakwana, uye iyo Lesite dumba yakagamuchirwa zvakanaka!
Nhasi, mazuva matatu 2020 China International Roofing uye Kuvaka Isina Mvura Technology Exhibition yakapera zvinobudirira. Pane varatidziri vanodarika mazana maviri nemakumi matanhatu pachiratidziro ichi, uye maBrand anozivikanwa kubva kuUnited States, Canada, Germany, France, Japan, China nedzimwe nyika nematunhu anotora chikamu. Zviratidziro zvinovhara cheni yese yeindasitiri yemabhizimusi asina mvura. Chiteshi chikuva. Chiratidziro chakaona kubatanidzwa kweinternet nepamhepo, uye makumi ezviuru zvevanhu vakaungana ipapo, yaive inozivikanwa zvikuru.
Exhibition horo: yakazara
Mune yekuratidzira isina mvura, yekamuri yekuratidzira horo, yakasarudzika yeLesite-dhizaini chaiyo yekuvaka dumba, uye vapfumi uye vane simba maLesite tsika yemuchadenga haizounze iwe chete chiitiko chikuru chezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, asiwo mabiko ekuona zvinoitika. Vateereri vakapinda munzvimbo yeLesite murukova rusingaperi. Chitarisiko chakakwana chechigadzirwa, kugadzirwa kwakanakisa, dhizaini-yepamusoro uye simba rakasimba rakakunda kurumbidzwa kubva kune vatengi.
Varatidzi kubva kumba nekune dzimwe nyika vakauya kuzoona nekushanyira saiti. Pfuti dzemumhepo dzakarongedzwa zvakanaka nemavhiri ekumanikidza, zvidimbu uye masitayera, zvakakwezva kutarisisa kwevatengi vazhinji, uye vakabvunza nekutenga imwe mushure meimwe. "WP4 uye LST-RM1" zvizere nekurumbidza uye nekupa kurumbidza kwakakwirira.
Simba: Zviri pachena kune vese
Seye-tech-tech bhizinesi rinogadzira epurasitiki yekutengesa uye yekushambadzira michina yekutsvagisa uye kugadzira, kugadzirwa uye technical service kubvunza. Internationalisation, world brand positioning, uye product product performance zvave makadhi ebhizinesi evaLesite, uye zvave kugonesawo vagadziri vezvinhu nevanozvigovera muindasitiri inodzivirira mvura kushandira pamwe neLesite.
Chiratidziro chepa-saiti cheJoyoung Waterproofing Company iri kutora chikamu muchiitiko ichi chinoshandisa chigadzirwa chitsva LST-WP4 kubva kuResite kuratidzwa. Maziso ane shungu, kutarisisa uye ruzivo rwechokwadi rwemunhu wese ari pachiitiko zvakare anodudzira zvakakwana maLesite zvigadzirwa zvemabhizimusi Runako runoratidza kusimba kwetarisiro yeindasitiri yeLesite.
Famba wakasimba uye shuttle uchienderera. Chiratidziro ichi chave nezvibereko. Kubva pane zvese zvidiki diki pakutanga kwechiratidziro kusvika panguva yekupedzisira yechiratidziro, shamwari dzeLesite dzakazvipira kuita kwavo uye kushingairira kune zvakanakisa kuratidzira uku.
Kwemazuva matatu, shamwari dzedu dzanga dzichifamba nekudzoka muhoro yekuratidzira, zvichitungamira varatidziri kuti vashanyire, vachivapa tsananguro dzakadzama uye kuratidzwa kuri pa-saiti! Pano, isu tinodawo kutaura kune wese watinoshanda naye uyo akamisikidza kuratidzira: Iwe wakashanda nesimba.
Remangwana: kunyora pamwechete
Ndatenda kune wese munhu anotsigira Lesite nekuuya kudumba. Ndimi makatipa kurudziro yekuenderera mberi nekuvandudza, kuvandudza uye kuenda kumberi. Mune ramangwana, isu tisingazungunuke kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye tinoshandira iyo indasitiri nemoyo yedu.
Lester anotambira vatengi vanofarira epurasitiki welding uye maindasitiri emidziyo yekupisa kuti vashanyire chero nguva. Mune ramangwana, tinokukoka iwe kuti unyore pamwe chete! Kune anovimba mugungwa, uye nyika iri padhuze nepadhuze, achitarisira kuzotiona zvakare mugore rinouya！
Post nguva: Jan-07-2021